प्रदेश Archives - Mega Online Television
नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वरको निवासमा बम विस्फोट
प्रदेश नम्बर ५ का नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको निवासमा गएराति बम विस्फोट भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एसपी हृदय थापाले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा बियरको बोतलमा पेट्रोलियम पदार्थ राखेर प्रहार गरिएको पाइएको बताए। प्रहरीले घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । ढकालको घरमा तीनवटा बम प्रहार भएको र त्यसले उनको गाडीमा क्षति पुगेको छ । ढकाल बिरामी परेर काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका बेला उनको निवासमा आक्रमण भएको हो । सैनामैना ८ रामापुर कलौनीमा रहेको उनको निवासमा बम प्रहार भएको हो। बम प्रहारबाट उनको गाडीको पछाडिको…
प्रदेश नं. २ मा बाढीपहिरो र डुबानका कारण कृषिमा सबैभन्दा बढी क्षति
अत्यधिक वर्षाका कारण गत महिना आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा करीब रु तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणी खनालले सो विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कृषितर्फ रु १ अर्ब ९७ करोड तथा पशुपक्षीतर्फ रु १ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । असार २६ गते र त्यसपछिको लगातार वर्षाका कारण मुलुकका कृषि तथा पशुपक्षीका क्षति…
विराटनगरलाई राजधानी बनाउने निर्णय, धनकुटाबासी आन्दोलनमा
प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी विराटनगर राख्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै धनकुटाबासीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । राजधानी विराटनगर राख्ने निर्णयको विरोधमा मङ्गलबार १२ बजेदेखि १ बजेसम्म चक्काजाम, मङ्गलबारै बेलुका ७ बजेदेखि साढे सात बजेसम्म ब्ल्याक आउट गरिनेछ । त्यस्तै वैशाख २३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने धनकुटाबासीले जनाएका छन् । प्रादेशिक राजधानी अभियान संघर्ष समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठका अनुसार धनकुटाको अस्तित्व, पहिचान र इतिहासलाई समाप्त पार्ने कार्य भएकोले आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए । धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाइनु पर्ने माग राख्दै विगतमा पनि आन्दोलन हुदै आएको थियो । सोमबार मात्रै…
ट्राफिक प्रहरीले सुरु गर्‍यो दुर्घटना घटाउने लक्ष्य
१३ वैशाख, बुटवल । बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले ‘ठाउँको ठाउँ सुधार’ कार्यक्रम शुरु गरेको छ । प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले एक हप्तासम्म सडक प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा ‘ठाउँको ठाउँ सुधार’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । साताव्यापी कार्यक्रमबाट दुर्घटना दर प्रतिमहिना ८७ लाई घटाएर ५० मा ल्याउने, घाइते हुने दर प्रतिमहिना ७ सय २ जनाबाट पाँच सयमा ल्याउने र मृत्युदर प्रतिमहिना ४८ जनाबाट ३० जनामा झार्ने लक्ष्य रहेको ५ नं. प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ कार्यक्रम अवधिमा बजार चोक क्षेत्रमा सवारी चालकलाई स्पिड कन्ट्रोल…
Featured प्रदेश बिशेष समाचार
बृद्धकृष्णले छेडाए सातौ पटक जिब्रो
April 15, 2019 Editorial Team
काठमाडौ, २ बैशाख–भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको बोडेमा परम्परादेखि चल्दै आएको जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाउनुभएको छ । मध्यपुर थिमी ८ बोडेका ४७ वर्षीय श्रेष्ठले सोमबार सातौं पटक जिब्रो छेडाउनुभएको हो । यसअघि २०६२ देखि ०६५ सालसम्म लगातार चार वर्षसम्म जिब्रो छेडाएका श्रेष्ठले २०७४ र २०७५ सालमा पनि जिब्रो छेडाउनुभएको थियो । जिब्रो छेडाउनका लागी बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठ तीन दिन भोकै बस्नुभएको थियो । करिब १ फिट लामो सियोलाई एक महिना देखि तेलमा डुबाइ राखिएको थियो । जिब्रँे छेड्नु अघि कर्मी नाइकेले सम्पूर्ण देवीदेवताको प्रार्थना गर्ने परम्परा…
Featured प्रदेश बिशेष राजनीति विचार / विश्लेषण समाचार